FIFANINANA HO AN’NY ASAN-GAZETY “Ohatrinona no tetibolan’ny kaominina misy ahy?” - Transparency International - Initiative Madagascar
FIFANINANA HO AN’NY ASAN-GAZETY “Ohatrinona no tetibolan’ny kaominina misy ahy?”
Nivoaka ny 12 Septambra 2016 ao amin'ny Hetsika, An-gazety,
Lohahevitra: Ohatrinona ny tetibolan’ny kaominina misy ahy?
Daty farafametrahana ny fisoratana anarana: 1 hatramin'ny 15 febroary 2018 (12 ora atoandro)
Fifaninana misokatra ho an’ireo:
Mpanao gazety (L/V)
Terantany Malagasy sy mpanao gazety terantany vahiny monina eto Madagasikara 18 taona na mihoatra amin’ny fanombohana ny fifaninanana.
Azonao alaina eto ny fitsipiky ny fifaninana an-gazety 2016 “Ohatrinona ny tetibolan’ny kaominina misy ahy?” amin’ny fiteny Malagasy
Azonao alaina eto ny taratasim-pisoratana anarana amin’ny fifaninana an-gazety 2016 “Ohatrinona ny tetibolan’ny kaominina misy ahy?”
Mba hanomezan-danja ireo mpanao gazety an-tsoratra, amin’ny onjam-peo sy ny fahitalavitra nohon’ny asam-panadihadiana ataon’izy ireo manodidina ny lohahevitra fangaraharann’ny tetibola, I Transparency International Initiative Madagascar dia mikarakara fifaninanana an-gazety mitondra ny lohateny hoe “Ohatrinona ny tetibolan’ny kaominina misy ahy?” ho amin’ity taona 2017 ity. Ny fifaninana dia mitondra ny lohatenin’ny tetikasa tontosain’i Transparency International Initiative Madagascar tohanan’ny masoivohon’ny Frantsa eto Madagasikara. Io tetikasa io dia entina hanatsarana ny fangaraharan’ny tetibola sy ny fandraisan’anjaran’ny olom-pirenena ao amin’ny kaominina miisa enina ambin’ny folo ao amin’ny faritra DIANA sy Boeny ary koa hamerenana ny fahatokisan’ireo olom-pirenena sy ireo mpandraharaha ao amin’ireo kaominina ireo amin’ny alalan’ny fitantanana mangarahara ny kaominina.
Amin’ny alalan’ny fampahalalam-baovao ireo olom-pirenena, ireo mpanao gazety dia mitàna andraikitra lehibe amin’ny fangaraharana. Araka izany, ny votoatin’ny fifaninanana di any hanome lanja ny asan’ireo mpanao gazety matihanina sy ireo mpanao gazety tanora nohon’ny fampahalalan’izy ireo ny olona ny fangaraharan’ny tetibolan’ny kaominina. Ny fifaninanana dia misolatra ho an’ireo mpampita vaovao an-tsoratra, amin’ny alalan’ny onjam-peo sy ny fahitalavitra. Ary koa ny fandraisana anjara amin’ny fifaninanana dia tsy handoavam-bola. Ireo lahatsoratra sy fanadihadiana dia tsy maintsy notontosaina ny taona 2017. Azo avoaka amin’ny alalan’ny lahatsoratra (gazety na amin’ny internet), lahatsoratra anaty blog, horonan-tsary na horonam-peo fanadihadiana, horonantsary na horonam-peo mirakitra resadresaka, fanadihadiana ara-tsary, fanadihadiana ao amin’ny web, famoronan-tsary nomerika na sary sy sariitatra.
Hamporisihana ny fandraisan’anjaran’ireo vehivavy sy ireo tanora amin’ny alalan’ny fametrahana ny sokajy “Mpanao gazety vehivavy” sy ny iray hafa “Tanora mpanao gazety” ho an’ny haino aman-jery tsirairay (mpampita vaovao an-tsoratra, onjam-peo sy fahitalavitra) ankoatry ny sokajy “Asa fanaovan-gazety fanadihadiana”. Ankoatr’izany, ny mpitsara dia hanome “Loka manokana” ho an’ny vondrom-pampitàm-baovao izay nosafidiany nohon’ny asa miavaka ataon’izy ireo ao anatin’ny fangaraharan’ny tetibolan’ny kaominina.
Ny lanonana hizaràna ny loka miisa 10, dia ho tontosaina aty Antananarivo ny zoma 21 oktobra 2016. Ny sarandalan’ireo mpandresy avy any amin’ny faritra ivelan’Antananarivo eto Madagasikara dia hiantohan’ny Fedex, Sampana misahana ny fizaràna ireo taratasy sy entana alefa paositra, izay mpanohana ny fifaninana.
Ireo izay te handray anjara dia afaka mandefa ny lahatsoratra sy/na fanadihadiana notontosain’izy ireo miaraka amin’ny taratasim-pisoratana anarana alohan’ny 17 oktobra 2016 amin’ny 12 ora:
Amin’ny alalan’ny mailaka contact@transparency.mg
Na aterina mivantana amin’ny adiresy
Raha mila fanazavana fanampiny dia azonareo atao ny mifandray aminay amin’ny alalan’ny laharana 020 22 288 73 na ny mailaka contact@transparency.mg
Mirary soa antsika rehetra !
Le proje t Ohatrinona ny tetibolan’ny Kaominina misy ahy ? (Quel est le budget de ma commune ?) est mis en œuvre par Transparency International-Initiative Madagascar. Il est soutenu par le fonds « Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs » (PISCCA) de l’Ambassade de France.